MDC inotungamirwa naVaNelson Chamisa inoti iri kuenderera mberi nehurongwa hwayo hwekuratidzira nemusi weChishanu, kunyange hazvo isati yanzwa kubva kumapurisa.
MDC yakazivisa mapurisa svondo rapera kuti ichapinda mukuratidzira uku sezvinodiwa nemitemo yenyika.
Asi bato iri rinoti kusapindura kwemapurisa hakusi kuzotadzisa hurongwa hwekuratidzira uhu, sezvo bumbiro remitemo yenyika ichiripa kodzero yekuratidzira.
MDC inoti iri kuratidzira sezvo isiri kufara nehutongi hwemutungamiri weZanu PF, VaEmmerson Mnangagwa, avo bato iri rinoti haricherechedzi kusarudzwa kwavakaitwa gore rapera.
Sangano rinoona nezvesarudzo munyika, reZimbabwe Electoral Commission, rakazivisa gore rapera kuti VaMnangagwa ndivo vakanga vakunda musarudzo yemutungamiri wenyika.
Asi MDC yakapikisa izvi mudare reConstitutional Court, iro rakapa mutongo waitambira zvakanga zvaziviswa musarudzo dzegore rapera nasachigaro weZimbabwe Electoral Commission, Amai Priscilla Chigumba.
Asi MDC inoti VaMnangagwa vari kutadza kugadzirisa zviri kunetsa munyika, izvo zviri kupa kuti nyika ishaye magetsi, mafuta edzimotokari, uye kukwira kwemitengo yezvinhu mazuva ose.
Asi mutevedzeri wegurukota rezvekuburitswa kwemashoko, VaEnergy Mutodi, vanoti MDC inogara yakati ichaita ratidziro murunyararo asi ichizopedzisira yaita mhirizhonga.
Asi VaChibaya vanoti vari kuzviziva kuti Zanu PF iri kugadzira zvipfeko zveMDC zvichapihwa vanhu kuti vazovhiringa kuratidzira kwakarongwa nebato ravo.
Senzira yekuti izvi zvisaitike, VaChibaya vanoti vachange vaine nhengo dzebato ravo dzichachengetedza runyararo, uye pakaita nhubu dzinoda kukonzera mhirizhonga, vachadzibata vachidziisa mumaoko emapurisa.
Muna Ndira, sangano reZimbabwe Congress of Trade Unions rakadaidzira kuti vanhu vagare mudzimba dzavo kwemazuva matatu.
Asi vanhu vakapinda mumigwagwa iyi vachiratidzira.